Ny iPadOS 15 dia mandray tsara ny fitehirizam-boky amin'ny Multitasking sy App Library Vaovao IPhone
iPadOS 15 dia mandray ny Multitasking sy ny App Library
Tsiambaratelo nitomany io. iPadOS 15 nanomboka naseho tao amin'ny WWDC 2021 ary nanambara fomba vaovao hijerena fampiharana miaraka amin'ny Apple i Apple App Library. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fahatongavan'ity asa ity, dia toy izany koa ny widgets amin'ny efijery an-trano toy ny efa misy ao amin'ny iPhones miaraka amin'ny iOS 14. Ary farany, nomena ny fiverenana ihany koa ny fihevitry ny multitasking sy ny Split View ary ny fizarana Split Over, mamela ny fanatsarana ny famokarana ao amin'ny iPadOS 15.
App Library, Multitasking ary Widgets amin'ny iPadOS 15
iPadOS 15 dia hanomboka seho an-trano vaovao. Ampidirina toy izao izy ireo ireo widgets izay efa ananantsika amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 14. Ho fanampin'izay, efa manana ny App Library misy izahay, mpandefa ho an'ny rindranasa rehetra mba tsy hahavery antsipirihany izay ananantsika amin'ny fitaovantsika. Mazava ho azy fa nifanaraka tamin'ny interface iPad. Tonga any amin'ny iPadOS 15 ireo widgets lehibe hampifanarahana azy amin'ny efijery an-trano, mamoaka, ny tsiro ny mpampiasa indray.
Miarahaba antsika ihany koa a lahasa multitasking nohavaozina. Ny Split View dia nanjary saro-pantarina kokoa ary ankehitriny isika dia afaka manokatra rindranasa amin'ny maody Split View ary hisafidy ny fampiharana manaraka izay hisokatra amin'ny efijery roa, hongotana amin'ny efijery. Raha vantany vao misokatra ianao dia afaka mifandray amin'ireo rindranasa roa amin'ny alàlan'ny fampisehoana atiny ao amin'ny Split Over ary asehoy raha mila lehibe kokoa izahay avy eo.
Ireto workflows ireto dia tsy maintsy andramana, saingy azo antoka fa fahombiazana ho an'ny iPadOS 15.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » iPadOS 15 dia mandray ny Multitasking sy ny App Library
AutoTranslate amin'ny fanatsarana ny app iPadOS sy Notes
iOS 15 dia mitondra fanatsarana betsaka amin'ny AirPods Pro